LXQt 0.17.0 yasvika nekuvandudzwa kwepaneru uye idzi dzimwe shanduko | Linux Vakapindwa muropa
Ingori pasi pemwedzi mitanhatu mushure meiyo previous version, Hong Jeng Yee nevamwe vese veboka rekuvandudza reLXDE vaburitsa Zvikamu LXQt 0.17.0. Uku ndiko kusimudzira kukuru, asi isu tinofanirwa kuziva kuti tiri kutaura nezve nharaunda dzakajeka, saka shanduko hadzisi dzinotyisa seidzo dzakaburitswa muGNOME, zvakaderera pane izvo zvakabatanidzwa muzvinyorwa zvitsva zvePlasma mune iyo ini kuda kufamba.
Asi nekuda kwekuti hapana shanduko dzinopisa hazvireve kuti havapo, uye LXQt 0.17.0 yauya nesarudzo yepaneru yepasi inoita kuti iite sedoko, muchidimbu. Sarudzo yatiri kutaura nezvayo ichaita izvozvo, kana hwindo rikakwidziridzwa, jira repasi richavanzwa, chimwe chinhu icho ini pachangu chandinoona chinonakidza mumateki makuru uye zvishoma mune zvidiki, kutaura zvazviri handichishandise, asi iri sarudzo yandanga ndichiona hupenyu hwangu hwese uye ikozvino iri mune ino graphical nharaunda. .
Pfungwa dzeLXQt 0.17.0
Sarudzo nyowani inozoviga otomatiki pani yepasi kana hwindo riwedzerwa kana kuiswa pamusoro payo.
Tsigiro yekuratidza zuva rekugadzira faira mune maneja faira.
Tsigiro yeasina-LXQt kunyorera kusevha marongero avo ekupedzisira panopera musangano.
Nguva-ye-yekushandisa kuratidza kwesimba uye bhatiri yakawedzerwa kune maneja wemagetsi.
MaLaunchers zvino anogona kugadzirwa kubva kumafaira maneja maturusi menyu.
Yakagadziridzwa rutsigiro rweSVG.
Kuvhurwa kwesarudzo yakasanganiswa yemafaira ane mhando dzakasiyana dzemime kwakagadziridzwa.
Natural keyboard yekufambisa yakawedzerwa kune desktop.
Kunatsiridzwa mune dzakasiyana QT kunyorera, senge QTerminal, LXImage kana LXQt Archive Manager.
Zadza rondedzero yeshanduko, mune yako GitHub peji.
Kuburitswa kweLXQt 0.17.0 zviri pamutemo, asi, sekugara mune izvi zviitiko, izvozvi zvinongowanikwa chete mune fomu yekodhi. Ivo vanogadzira ekusiyana kwakasiyana vanoshandisa ino graphical nharaunda vachange vachiwedzera iyo nyowani vhezheni mumavhiki anotevera kana mwedzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » LXQt 0.17.0 yasvika nekuvandudzwa kwepaneru uye nedzimwe shanduko
Kuona kufamba muzvirongwa zvitsva nezvakare chiratidzo chehutano hwakanaka. Kuona kuti vhiri rakadzoswazve kasingaperi uye shanduko dzakakosha zvinoshungurudza.